Kushanda neMemory Profiler Game Chirongwa Kubatana
Famba uchienda kuYomi trailer nhau
Njodzi Yesimbi Mitambo nhetembo
Hondo Yehondo: Iyo Classic Navy Combat Game Zvidobi
Yekupedzisira maPirates Mitambo nhetembo
Iwo Akaunganidzwa Mabasa Mitambo nhetembo
Iwe unoyamwa kupaka nhau
Kushanda neMemory Profiler
Posted on 13. May 2022 By Claudia Wendt	No Comments kushanda neMemory Profiler
Iyo Memory Profiler ipakeji nyowani yeUniity 2018.3 kana yepamusoro iyo inobvumidza iwe kuti uongorore iko ndangariro kushandiswa kweprojekiti kuti uwane kuyeuka kwekuyeuka uye kupatsanurwa. Ndangariro dzinodonha dzinogona kuitika kana ndangariro dzakagoverwa asi dzisingatongogadziriswazve kuti dzishandiswezve mushure mekunge ndangariro dzisisichadiwe. Mune ino dzidziso, iwe unozodzidza mashandisiro eMemory Profiler kutarisa kuyeuka kwekuyeuka.
Nenhoroondo yekuyeuka iwe unogona kuongorora mashandisiro ekurangarira eprojekti kuti uwane kunodonha uye kupatsanurwa. Ndangariro dzinodonha dzinogona kuitika kana ndangariro dzakagoverwa asi dzisingaburitswe mushure mekunge dzisisiri kudikanwa. Kuita kwechirongwa kunodzikisira kana ndangariro yapera, iyo inozopedzisira yaendesa kuchirongwa (uye pamwe kunyangwe iyo yekushandisa mudziyo) ichirovera. Kana ndangariro ikagoverwa mumabhuroko madiki madiki pane kuita zvidiki zvinogumbura, inonzi kuyeukwa kwekurangarira. Nekuda kweizvozvo, diki, dzisina kupihwa nzvimbo dzekurangarira pakati pemabhureki akagoverwa hadzichawanikwi kuti dzishandiswe.
Kuisirwa kweye memory profr
Iyo Memory Profiler inoshanda neiyo Unity Edhiyo pamwe nekuvandudza inovaka uye inowanikwa mune yePakeji Maneja sepakeji yepakeji.
Maitiro ekuisa iyo Memory Profiler:
1. MuMubatanidzwa Mupepeti, sarudza Package Manager kubva kuWindow inodonhedza pasi runyorwa.
2. Dzvanya paPamberi uye sarudza Ratidza Ratidza Mapakeji.
3. Tsvaga Memory Profiler wobva wadzvanya gadza mukona yezasi yekurudyi yeiyo Package Manager hwindo.
4. Kana uchinge waiswa, unogona kuwana iyo Memory Profiler nekusarudza "Analysis"> "Memory Profiler" kubva pa "Window" donhwe-pasi runyorwa.
Nyora memory memory
Iyo yekuchengetedza profil inogona kunongedza ikozvino kuri kuita kuvandudza kuvaka pane komputa yemuno kana kuigovera yakatarwa IP kero yeinetiweki komputa.
1. Usati watora marara, unofanirwa kusarudza kwaunoenda. Nokusingaperi, iyo tarisiro ndeye Kubatana mupepeti.
2. Kuti usarudze chinangwa chitsva, tinya menyu ekudonhedza mukona yekumusoro kuruboshwe rweMemory Profiler.
Dzvanya bhatani reKutora kuti utore razvino chimiro chekuchengetedza cheicho chakasarudzwa. Ziva kuti iyo inobata pachayo inotora imwe ndangariro. Mune zvimwe zviitiko, izvi zvinogona kukonzera tarisiro yekumisidzana kana kuparara kana yapera ndangariro.
Tumira mufananidzo wepfungwa yakatorwa
1. Dzvanya bhatani reIngenisa riri pamusoro peMemor Profiler hwindo.
2. Shandisa iyo File Fomati yekudonhedza-pasi menyu mukona yezasi kurudyi yeRinotora Snapshot Faira dialog bhokisi kuti usarudze fomati yeiyo yekuchengetedza snapshot iwe yaunoda kuunza. Sarudzo dzinosanganisira .snap mafaera akatorwa neMemory Profiler uye .memsnap * mafaera akagadzirwa neBitbucket Memory Profiler.
3. Enda kune yako snapshot uye wosarudza iyo. Dzvanya bhatani reVhura.
4. Kekutanga nguva yaunotora memory snapshot, dhairekita rakanzi MemoryCaptures richagadzirwa (padanho rakaenzana neAssets folda, kwete mune ino folda). Iwe unogona zvakare kuchengetedza ndangariro zviratidziro mune ino folda kuti zviwanikwe.
5. Wona ndangariro yekurasa
Mushure mekutapa kana kuunza kunze (kusanganisira kuendesa iwo mufananidzo kuiyo MemoryCaptures dhairekitori), iwo mufananidzo uchaonekwa mukoramu yekuruboshwe yewindow Profiler hwindo. Dzvanya Vhura kuti uone chimiro chekuchengetedza.
Iyo yakajairwa uye inonyanya kuona intuitive chimiro chemuti (Mufananidzo 06). Aya maonero anoratidza huwandu hwendangariro hunoshandiswa nechimwe nechimwe chinhu chemhando zvakaringana. Mumuenzaniso wedu, gumi nemaviri emimvuri inogara yakazara ne126 MB ye RAM.
Kuti utarise chikamu muchidimbu, tinya kuti uone zvinhu zvese uye nhanho dzadzo dzekurangarira. Rumwe ruzivo rwakadzama runoratidzwa mune tafura pazasi pechimiro chemuti. Dzvanya misoro kuti urongedze tafura nemutengo kana boka.
Iyo tafura yekutarisa, iyo iri zvese zviri pasi pechimiro chemuti uye pasi pechimiro chendangariro, ine ruzivo rwakadzama pamusoro pekushandisa ndangariro kwezvinhu zvega.
Kuona kwakatwasuka, iyo Mepu yeMepu, inoratidza mamisirwo ekurangarira mumarudzi akasiyana-siyana anoratidza ndangariro dzakasiyana. Izvi zvinogona kubatsira mukutsvaga kupatsanurwa kwendangariro.
Tsvaga ndangariro idonhe
Maitiro ekuwana ndangariro idonhe:
1.Tanga mutambi, iise seye yekuchengetedza profile tariso uye tora mufananidzo wechinhu chisina chinhu.
2. Takura nzvimbo yaunoda kuyedza. Tamba chikamu chechiitiko kurodha zvinhu zvinodiwa.
3. Bvisa pachiitiko nekutaipa Zviwanikwa.UnloadUnusedAssets () kana nekukwira / kugadzira nzvimbo isina chinhu kaviri
4. Tora imwe snapshot uye ubude playback mode.
5. Takura wekutanga uye wechipiri skrini muWorkbench wobva wadzvanya paDiff. Kubatana kunoverenga musiyano uripo pakati pema skrini maviri. Izvi zvinogona kutora masekondi mashoma zvinoenderana nesaizi yemufananidzo.
6. Mukutarisa kwetafura, tinya pane iwo musoro weiyo Dhavhoramu uye sarudza Boka.
7. Mapindiro akaiswa mumapoka: zvakafanana, mune zvese zviripamifananidzo, kubva pane yekutanga kudzimwa snapshot uye nyowani. Zvinyorwa zvitsva zvinokwanisika ndangariro kudonha.
Iyo Memory Profiler inzira yakanaka yekutarisa mashandisiro ekurangarira eprojekiti yako.
Kwete chete iwe unogona kuona chiri kushandisa inonyanya kuchengetedza nzvimbo, asiwo mashandisiro ari kuita chirongwa chako kana kushandisa zvisizvo nzvimbo yekuchengetera. Ndangariro dzinodonha uye kupatsanuka ndiwo mamwe ematambudziko akajairika anokanganisa chirongwa ichi
uye iyo Memory Profiler inozvinetsa.
Pakutanga kutumirwa 2020-03-16 16:46:00.
Chirongwa chemutambo	Tags:kubatana
Previous Post: Kudzoka Kwekusingaperi-Kupona Kwevatema
Next Post: Mabhesi Akarodzwa 4
Iyo kamera inotevera sei mutambi Chirongwa chemutambo
Iyo Mitambo Chikoro Chirongwa chemutambo
Mabhuroko muiyo Ekuona Mhedzisiro Girafu Chirongwa chemutambo
2D mwenje nemumvuri muUbatana Chirongwa chemutambo
Kubatana - Gadzira zvakakosha UI zvinhu Chirongwa chemutambo
Arcus Mhuka Studios Chirongwa chemutambo
Vashandi Nhasi: 99
Total maonero: 75612
Kunyoresa Mitambo nhetembo
Mega murume x Mitambo nhetembo
Muurayi weParadhiso ushingi
Kurarama Sei 2 raramo
Essays on Tsitsi Action
Mutambo tycoon Mitambo nhetembo
Mutambo usiri iwo naRoger Rabbit Mitambo nhetembo